Kusvira mukadzi wemu next door kumikukuk – Vanoda Zvinhu
Ndinogara Joni mumikukuk(dzimba dzemazenge),mu next door mangu munogara mumwe mu face nemukadzi wake vese vari vekumusha.Ini ndine game yekutora mahure kubhawa ndichisviirira ku den .
One day ndakatora muchangani akasvikoita noise yekuchemerera yakasvika pakupa mukadzi wemunext zembwe.Makuseni bhebhi richibuda maiguru wemu next vaitsvaira panze.ndakubva kunoperekedza bhebhi ndakasvika wakamira pa door pangu,zvikanzi bamunini mukoma wenyu havapo mazuvaano muchiita
munaitira pasi nezuro makandi kuvadzi .Ndakango erekana ndava pindurakuti pindai ndirape chironda gulez.Pane mushonga wandinawo.
Gulez iya yakango seka ichivhura door rangu hana yangu ikarova asi ini semusviiri ndakazongozvishingisa ndikati kudhara ndichichiva mazigaro awo. ndichiteera kumashure kwawo ndakabva ndavhara door ndichitenderera
kutarisa mukati ndakawona shasha yabvisa zambiya wanikwe choya chega chaga gulez iyoyo haigeri choya hameno kuti chii/.handina kutora nguva ndakananga pamuromo ndokukisina takamira shasha yakaisa ruoko
mubhurugwa mangu ndokutanga kundimbonyora takaenda takadaro kusvika tadonhera pamubhedha.
ndakatanga kutambisa matinji ,uku muroma urikusvisvina nyasto dzemazamo,ndakafambisa rurimi rwangu ndichiita sendoenda kunzeve ndipo pandakanzwa munhu akutaura semunhu anoda kuchema zvikanzi bamuni-niii
aaaaa uuuuu chipi- p,ndakabva ndaziva kuti shahsha yoda zvekukwirwa . nadakasimuka ndokumira kukona yemubhedha ndichibva ndaidhonzera ikoko.mai yaiva nemagaro vanhuee ndakaikwesha nadakamira shasha
yakarara ndakazoona yosimudza maoko ndikaziva kuti yaakuda zvekubatirira.ndakaipushira nechekumusoro ndokuwira pamubhedha ndisati ndai nyudza zvekare ndakambo svisvina ka beans munhu akasimukira mudenga sepane chaimubaya pakati pemusana.ndakasimuka ndokunyudza zve shondo yangu muna gulez ndobva ndatanga kukwesha ndichibaya maside ese ndakazongonza maiii maii bamunini ii baaaa iiiiiii fck fck uuuuu
zvakandiba pfungwa ndakabva ndakaoira fast sekashiri takatundirana zvekuti takanakirwa tese .chakandinetsa mashoko avakataura vakuenda zvanzi aa ndozvaichema musikana uya husiku izviiii…..kkkkkk
Next story Ndakavasejusa vachigeza Bamnini Francis
Previous story Kusvirana na Maxine paTalk City yepaJoina City!